DEG DEG: Tababaraha cusub ee Chelsea Antonio Conte oo lagu waayay dambigii lagu soo eedeeyay – Gool FM
DEG DEG: Tababaraha cusub ee Chelsea Antonio Conte oo lagu waayay dambigii lagu soo eedeeyay
(Italy) 16 Maajo 2016. Tababaraha xulka Talyaaniga isla markaana noqon doona macallinka Chelsea ee kal ciyaareedka soo socda Antonio Conte ayaa lagu waayay dambigii lagu eedeynayay.
Macallinkii hore ee Juventus ayaa lagu eedeynayay inuu ku guul darreystay inuu soo wargaliyo masuqmaasuq ciyaareed intii uu macallinka u ahaa kooxda Seina ee dalka Talyaaniga xilli ciyaareedkii 2010-11.
Conte ayaa markastaa dafiri jiray wararkaasi lagu soo eedeeyay laakiin ugu dambeyn maanta ayaa la caddeeyay inuu beri yahay isla markaana uu wax dambi ah lahayn.
Dacwad ooge ayaa soo jeediyay ama waydiisanayay in lix bilood la ganaaxo Conte, laakiin Gazzetta dello Sport ayaa warineysa in garsoore Pierpaolo Beluzzi uu maanta caddeeyay in wax dambi ah lagu waayay.
Sikastaba, arrinkan farxada leh ayaa ku soo aadaya waqti fiican maadaama ay ku soo food lahayd tartanka xiisaha badan ee Euro 2016 iyo waliba inuu intaa kaddib qaban doono xilka kooxda lagu naaneyso Blues ee Chelsea.
Waa sidee dareenka Theo Walcott kaddib markii laga reebay xulka England ee Euro 2016?